पखाला लागेर अस्पताल पुगेकालाई ‘डेट एक्पायर्ड’ स्लाइन ! — Newskoseli
पखाला लागेर अस्पताल पुगेकालाई ‘डेट एक्पायर्ड’ स्लाइन !
सर्लाही, २४ पुस ।
सदरमुकाम मलङ्गवास्थित जिल्ला अस्पतालमा बिरामीलाई म्याद गुज्रेको (डेट एक्पायर्ड) स्लाइन दिइएको फेला परेको छ ।
पखला लागेर उपचार गराउन अस्पताल पुगेकी मलङ्गवा– ३ की ४५ वर्षीया उषादेवीलाई म्याद गुज्रेको ‘आरएल’ स्लाइन पानी दिएको भेटिएको हो ।
उपचार गराउन सोमबार बिहान अस्पताल पुगेकी उषालगायत अन्य तीन जनालाई चिकित्सकले म्याद गुज्रेकै स्लाइन पानी चढाइरहेको भेटिएको हो । बिरामी परेपछि घरका व्यक्तिले अस्पताल पुर्‍याएको र पछि आफू जाँदा स्लाइन पानी म्याद गुज्रेको फेला परेको उनका छोरा साजन चौधरीले बताए ।
तीन महिना पहिले नै म्याद गुज्रिसकेका स्लाइन पानी चढाएको देखेपछि आफूले त्यसलाई तुरुन्त रोक्न लगाएको जानकारी उनले दिए । ‘म्याद गुज्रेको स्लाइनको प्रयोगका कारण घर लग्नासाथ आमालाई ज्वरो आयो’– उनले भने । मलङ्गवामै रहेको एक निजी क्लिनिकमा आमालाई उपचार गराइएको उनले बताए ।
अस्पतालजस्तो संवेदनशील स्थानमा लापरबाही गर्नेलाई कानुन अनुसार कार्बाही हुनुपर्ने माग उनले गरे । बिरामीको चाप धैरे भएकाले सबैलाई एकैचोटि उपचार गर्न खोज्दा हतारमा म्याद गुज्रेको औषधि प्रयोग हुन पुगेको अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट वीरेन्द्रकुमार मण्डलले बताए ।
भण्डारमा म्याद भएका र गुज्रेका औषधि एकै ठाउँमा रहेकाले हतारमा झिक्दा म्याद गुज्रेको औषधि प्रयोग हुन पुगेको दावी उनले गरे । सो क्रममा लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाएको राससले उल्लेख गरेको छ ।